Fayyisaa Leellisaa tarree 'FP 2016 Top 100 Global Thinkers' seene - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Fayyisaa Leellisaa tarree ‘FP 2016 Top 100 Global Thinkers’ seene
Fayyisaa Leellisaa tarree ‘FP 2016 Top 100 Global Thinkers’ seene
Atleet Fayyisaa Leellisaa jagnummaa Olompikii Rio 2016 irratti mul’iseen maqaan isaa tarree ‘FP Top 100 Global Thinkers’ keessa seene. Akka barruu Foreign Policy’itti Fayyisaa tarree ‘Top 100 Global Thinkers’ keessa kan isa seensise ajjeechaa, hidhaa fi gidiraa ummata isaa irra gayu guutuu addunyaatti agarsiisuudhaaf jecha seera olompikii yeroo dheeraadhaaf ture caccabsuu ykn funduura dhaabachuu isaatii.
Akka seera olompikiitti atleetiin tokko mormii dhaggeessisuu ykn ergaa siyaasaa kamuu dabarsuun dhoorgamaadha. Tankaarfii fudhateef meedaaliyaa dhabuu fi fiigicha irraa guutummatti akka hin hirmaanne dhoorgamuu akka malu osoo beeku Fayyisaan saba isaaf jecha kan tankaarfii gotummaa fi seena qabeessa kan fudhate. Garuu, tankaarfiin isa kuni Oromoo biraa qofa osoo hin taane gutuu hawaasa addunyaa biraa dinqisiifannaa fi kabaja guddaa isaaf argamsiisaa jira. Murteen amma FP fudhates qaamuma hujii Fayyisaaf beekkamiinsa sadarkaa addunyaa laatuuti.
Tarree ‘FP Top 100 Global Thinkers’ kanniin keessa kan jiran namoota akka Hillary Clinton, Ban Ki-moon fi namoota bebbeekamoo heddutu keessa jira. Maqaan Fayyisaa tarree kanniin keessatti ka’uun isaa Fayyisaa fi Oromoo gutuudhaaf kabajaa guddaadha.
Previous articleABO-QC akka haarawaatti uf ijaaruu fi hooggana haarawas filachuu ifa godhe
Next articleWoyyaaneen Oromoota baatii lamaa oliif hiitee dararaa ture keessaa 9,800 gadi lakkisuudhaaf